France Archive - Gool FM - page 4	twitter
MUUQAAL: Memphis Depay oo kulankiisii ugu horreeyay u saftay kooxdiisa cusub ee Lyon
(France) 23 Jan 2017. Memphis Depay ayaa kulankiisii ugu horreeyay u saftay Lyon kaddib marii uu ka soo tagay kooxda Man United.
Xiddiga reer Holland ayaa daqiiqadii 79-aad lagu badelay Mathieu Valbuena kulan ay 3-1 uga adkaadeen Marseille kaa oo ka dhacay Stade des Lumieres.
Depay ayaa boggiisa soo dhigay muqaal yar isagoona soo raaciyay inuu ku faraxsan yahay inuu kulankiisii ugu horreeyay saftay isla markaana uu dareen fiican dareemayo inuu garoonka ku soo galo maaliyada Lyon, wuxuuna ka mahad celiyay soo 
Sidaa darteed Verratti ayaa inta uu jilbo jabsaday madaxa ugu baasay 
PSG oo dalab qaali ah ka gudbisay Ivan Perisic
(Paris) 21 Jan 2017 Kooxda PSG ee dalka faransiiska ayaa baadi goob ugu jirta saxiixa laacibka qadka dhexe ee Inter Milan Ivan Perisic sida ay baahisay Le 10 Sport.
Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda PSG Patrick Kluivert ayaa hordhigay kooxda Inter Milan aduun dhan 40 milyan oo euro si uu u helo Ivan Perisic.
Ivan Perisic ayaa ka ciyaari kara weerarka iyo qadka dhexe, waana laacib buuxin kara booska Cavani hadii uu dhaawac soo gaaro.
Tababare Unai Emery ayaa u arka Ivan Perisic laacib ku haboon kooxdiisa isla markaana 
Balotelli oo caro ka muujiyay aflagaadadii ay xalay kula keceen taageerayaasha kooxda Bastia
(Nice) 21 Jan 2017 Weerar yahanka kooxda Nice ee dalka faransiiska ee Mario Balotelli ayaa ka hadlay aflagaagadii ay xalay kula keceen taageerayaasha kooxda Bastia.
Taageerayaasha kooxda Bastia ayaa xalay ku qaylinayay codka daanyeerka oo ay ula jeedeen Mario Balotelli, taas oo ku dhalisay inuu dhaliil u muujiyo shacabka reer France.
Kooxda Nice ayaa xalay barbaro 1-1 ah lagashay kooxda Bastia, waxayna halis ugu jiraan inay waayaan hogaanka horyaalka hadii Monaco ay ka soo adkaato kooxda Lorient.
“Natiijo aan u qalanay ayaan ka helnay Bastia, waa inaan 
Patrice Evra oo looga gacan haatinayo Faransiiska
(Lyon) 21 Jan 2017 Daafaca kooxda Juventus ee Patrice Evra ayaa laga doonayaa horyaalka Faransiiska sida saaka lagu daabacay wargayska L’Equipe.
Wargayska ayaa sheegay in maamulka kooxda Lyon ay diyaar u yihiin soo xerogalinta Patrice Evra, kadib markii uu fashilmay heshiiskii uu ugu biiri lahaa kooxda Crystal Palace.
Patrice Evra ayaa kula jira kooxdiisa Juventus heshiis dhacaya dhamaadka xiliciyaareed kan, wuxuuna dalabyo ka helay shiinaha iyo horyaalka ingiriiska, balse wadahadalada uu uga tagayo Juventus ayaa noqonaya kuwo aan miro dhalin.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Patrice 
Angel Di Maria oo iska diiday dalabyada uga imaanaya Shiinaha
(Paris) 20 Jan 2017 Xiddiga reer Argentina ee Angel Di Maria ayaa iska diiday u dhaqaaqida horyaalka shiinaha oo looga soo bandhigay mushaar waali ah.
Angel Di Maria ayaa cadeeyay inuu kula jiro heshiis kooxda PSG isla markaana uu diyaar u yahay inuu dhamaysto qandaraaska uu kula jiro kooxda reer France.
28 jirkaan ayaa intaa ku daray in qoyskiisu ay ku faraxsanyihiin joogida magaalada Paris sidaas darteedna uusan diyaar u ahayn u dhaqaaqida shiinaha.
“Laba sano ayaa iiga harsan heshiiskeyga PSG, waan sii joogi doonaa 
Lambarkee loo xiray Depay muxuuse ka yiri shirkii jaraa’id ee kooxdiisa Lyon?
(Lyon), 20 Jan 2017 –Kooxda Kubadda Cagta Lyon ee Faransiiska ayaa shir jaraa’id oo haatan ay qabatay kusoo bandhigtay Laacibkeeda cusub ee Garabka ka dheela ee Memphis Depay oo ay ka soo iibsatay kooxda Manchester United.
Lyon waxa ay boggeeda Twitter-ka ku shaacisay in heshiiska Depay ay ku soo afjartay 16 Milyan oo Euro, waxaana lagu sharfay funaanadda lambarka 9′ ee Olympique Lyonnais.
22 jirkan Reer Holland oo ka hadlayay shirka jaraa’id ayaa waxa uu yiri “Aad baan ugu faraxsanahay inaan ku 
RASMI: Memphis Depay oo dhamaystiray ku biirista kooxda Lyon
(Lyon) 20 Jan 2017 Laacibkii kooxda Manchester United ee Memphis Depay ayaa dhamaystiray ku biirista kooxda Lyon ee dalka faransiiska.
Kooxda reer France ayaa si rasmi ah u shaacisay inay la wareegtay xiddiga reer Holland ee Memphis Depay kaas oo ku dhibanaa kooxda Manchester United.
Lyon ayaa kula wareegtay Memphis Depay aduun dhan 16 milyan oo Ginni, 22 jirkaan ayaana u dhaliyay United 7-gool tan iyo markii uu ku soo biiray 2015.
Memphis Depay ayaa ka soo dhaqaaqay kooxda PSV Eindhoven ee dalka Holland markaas oo uu 31 
Ancelotti oo beeniyay inuu la soo wareegayo Marco Verratti
(Munich) 20 Jan 2017 Tababaraha kooxda Bayern Munich ee Carlo Ancelotti ayaa beeniyay inuu ku fikirayo saxiixa laacibka PSG ee Marco Verratti.
Wargayska Le Parisien ee dalka Faransiiska ayaa baahiyay isbuucaan in tababare Ancelotti uu dadaal dheer ugu jiro sidii uu kooxdiisa ku keeni lahaa Marco Verratti.
Ancelotti ayaa sheegay in Marco Verratti uu sanado badan la sii joogi doono kooxdiisa PSG, wuxuuna beeniyay inuu ku fikirayo waqtigaan saxiixiisa, si uu ugu buuxiyo booska uu banaynayo Alonso oo ka fariisanaya ciyaaraha.
“Sifiican ayaan u garanayaa Marco, laba xiliciyaareed 
Memphis Depay oo gaaray Faransiiska….(Maanta oo lagu wado in…)
(Lyon) 19 Jan 2017. Memphis Depay ayaa gaaray dalka Faransiiska iyadoo lagu wado in maanta la dhammeystiro heshiiska uu ugu biirayo kooxda Lyon.
Naadiga Lyon ee ku jirta kaalinta afaraad ee horyaalka Faransiiska ayaa boggeeda Twitter ku xaqiijisay inuu soo gaaray flop-ka Man United si ay uga wada hadlaan heshiiska uu ugu soo biirayo.
Kooxda reer France ayaa la filayaa inay laacibka reer Holland ka bixiso lacago dhan 15-milyan oo bound taa oo sare ugu sii kaceysa ilaa 21.7-milyan oo bound marka 